Pepa Vagadziri & Vatengesi - China Pepa Fekitori
Inoraswa Craft Pepa French Fries Bhokisi
Chikafu chinokurumidza chinozivikanwa pasirese, uye pakati pezvikafu zvinokurumidza, mafrimu eFrance ndicho chigadzirwa chakanyanya kudyiwa sezvo chiri chikafu chinonaka uye chinodiridza mukanwa. Kuchengetedza kunonaka kwavo uye kuwedzera hupenyu hwavo, kudiwa kwesimba rakasimba uye rinokwezva remapaketi mhinduro rinowedzera. Iyo yakasarudzika uye yakanyatsogadzirwa French fry mabhokisi anoonekwa seyakanyanya-gadziriso mhinduro yezvigadzirwa zvakadaro sezvo zvakagadzirwa chete kuwedzera mwero wekudzivirira wezvigadzirwa zvekudya kunge mafirita. Vari kutamba basa rakakosha mukukwezva vatengi nekuwedzera kutengesa uye kugona kwevatengesi.
Corrugated Inoraswa Inokurumidza Chikafu Burger Bhokisi
Chunkai Chikwata chakakwenenzverwa Bhodhi Mabhokisi uye Matareti ane huwandu hwakawanda hweEnharaunda Neshamwari (Eco) Zvigadzirwa Isu tinopawo tsika kudhinda neako logo pane zvakawanda zvigadzirwa zvedu. Nekusarudza zvigadzirwa zvedu zvinogadziriswa zvigadzirwa uri kutora danho rakakura kuenda kunochengetedza chikafu chekuchengetedza zvisinei nekuti uri chitoro chekofi, shopu yekutora, bhizinesi rekudyira, resitorendi, hofisi kana mubatanidzwa mukuru. Deredza kabhoni tsoka yako nekusarudza zvigadzirwa zvedu.
Inoraswa Craft Pepa Soup Bowl
A Disposable Craft Pepa Soup Bowl mukombe unoraswa wakagadzirwa kubva mubepa uye unowanzo rongedzwa kana kuputirwa nepurasitiki kana wakisi kudzivirira mvura kubva mukubuda kana kunyura nepepa.Iyo inogona kugadzirwa nepepa rakadzokororwa uye rinoshandiswa zvakanyanya pasirese. Tinogona kupa akasiyana saizi kubva 4oz kusvika 30oz makapu. Tinogona zvakare kugadzirisa iyo yemavara kudhinda kana zvinhu gramu. Chii chimwe, isu tinogona zvakare kugadzira iyo yekudhinda iwe.
Inoraswa Craft Pepa Soup Mukombe
A Disposable Craft Pepa Soup Mukombe mukombe unoraswa wakagadzirwa kubva mubepa uye unowanzo rongedzwa kana kuputirwa nepurasitiki kana wakisi kudzivirira mvura kubuda kana kunyura nepepa Iyo inogona kugadzirwa pepepa rakadzokororwa uye rinoshandiswa zvakanyanya kutenderera pasirese. Tinogona kupa akasiyana saizi kubva 4oz kusvika 30oz makapu. Tinogona zvakare kugadzirisa iyo yemavara kudhinda kana zvinhu gramu. Chii chimwe, isu tinogona zvakare kugadzira iyo yekudhinda iwe.
Brown Kraft Pepa Bhokisi Fekitori
Iyi Brown Kraft Pepa Bhokisi Fekitori ine Yakasarudza yemhando yepamusoro zvigadzirwa, machira akaomeswa uye akapfava, akatsetseka uye akatsetseka, anoshanda mushe, mamwe mamaki. Hwemhizha hunyanzvi, yakakwana kona kurapwa, yakanaka uye yakasimba. Kugadzirwa kwakasarudzika kunoita kuti bhokisi rezvipo riwedzere kuvezwa.
Yakadhindwa Pizza Bhokisi Mugadziri
Kuonekwa kweye 8 ”Rakadhindwa Pizza Bhokisi rakanaka, ruvara rwakajeka, pateni yacho inokwezva, uye hazvisi nyore kudzima. Inonyaradza uye inotsvedzerera pamusoro, sarudzo yakanaka yemapepa, chinhu chinofema, uye gomba dhizaini rinovimbisa kuti iyo piza haina kudzikira. Bhokisi iri rakakora uye rakasimba, chikafu-giredhi mbishi zvinhu zvine FSC chitupa, zvine hutano uye zvakatipoteredza zvine hushamwari, izvo zvinogona kusangana neiyo FDA standard, yakachengeteka uye isina kusvibiswa. Iyo crease dhizaini inoita kuti zvive nyore kuvhura uye kuvhara panguva yekuishandisa.
Corrugated Pepa Michero Bhokisi Mugadziri
Iri Corrugated Pepa Rezvibereko Bhokisi rine matatu matete epepa rakakora mapepa, akasimba uye anogara. Mavhavha akagadzirirwa kuita kuti chigadzirwa chisanyanya kuora. Yakasarudzika pateni yekudhinda, zvinoenderana nemufananidzo wemango, wakanaka uye nerupo, wedzera chigadzirwa kukosha. Mubato unonzwisisika mukugadzirwa, hazvisi nyore kutyora, uye haukuvadze ruoko. Bhokisi iri rakakora uye rakasimba, chikafu-giredhi mbishi zvinhu zvine FSC chitupa, zvine hutano uye zvine hushamwari zvakatipoteredza, izvo zvinogona kusangana neFDA standard, yakachengeteka uye kusvibiswa. -mahara. Iyo crease dhizaini inoita kuti zvive nyore kuvhura uye kuvhara panguva yekuishandisa.